Coronavirus (COVID-19) Related Travel Guide for Zimbabwe | Office Holidays
Coronavirus Travel Guide for Zimbabwe COVID-19 updates for Zimbabwe
Information about the status of Coronavirus (COVID-19) travel disruptions affecting Zimbabwe
If you are planning meetings and trips, our site is valuable to see when countries such as Zimbabwe are on holiday. As international travel has been seriously affected by the coronavirus(COVID-19) pandemic, we are updating the latest travel information about Zimbabwe in our interactive maps to help you plan your trips better.
Coronavirus Guidance for: Zimbabwe
Coronavirus: Travel status Passengers must show a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Coronavirus Notice Nationwide movement restrictions are in place indefinitely. Stay-at-home measures, limitations on internal movement, and nonessential business closures are in place. Formal sector employees can work 0800-1500.
This map shows the current status of travel to Zimbabwe. Highlight a country to see more information. Click to zoom in and filter the country comments underneath.
Please note that travel to Zimbabwe from the following places may be limited or unavailable. Even if travel is allowed, there may be specific stipulations in place, so please check the comments below:
Afghanistan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Albania Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Algeria Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
American Samoa Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Andorra Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Angola Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Anguilla Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Antigua and Barbuda Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Argentina Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Armenia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Aruba Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Australia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Austria Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Azerbaijan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bahamas Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bahrain Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bangladesh Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Barbados Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Belarus Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Belgium Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Belize Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Benin Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bermuda Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bhutan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bolivia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bonaire, Sint Eustatius and Saba Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bosnia and Herzegovina Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Botswana Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Brazil Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
British Virgin Islands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Brunei Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Bulgaria Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Burkina Faso Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Burundi Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Cambodia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Cameroon Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Canada Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Cape Verde Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Cayman Islands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Central African Republic Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Chad Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Chile Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
China Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Colombia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Comoros Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Congo Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Costa Rica Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Croatia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Cuba Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Curaçao Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Cyprus Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Czech Republic Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
DR Congo Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Denmark Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Djibouti Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Dominica Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Dominican Republic Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
East Timor Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Ecuador Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Egypt Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
El Salvador Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Equatorial Guinea Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Eritrea Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Estonia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Eswatini Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Ethiopia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Faroe Islands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Fiji Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Finland Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
France Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
French Guiana Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
French Polynesia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Gabon Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Gambia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Georgia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Germany Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Ghana Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Gibraltar Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Greece Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Greenland Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Grenada Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guadeloupe Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guam Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guatemala Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guernsey Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guinea Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guinea-Bissau Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Guyana Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Haiti Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Honduras Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Hong Kong Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Hungary Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Iceland Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
India Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Indonesia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
International Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Iran Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Iraq Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Ireland Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Isle of Man Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Israel Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Italy Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Ivory Coast Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Jamaica Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Japan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Jersey Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Jordan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Kazakhstan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Kenya Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Kiribati Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Kosovo Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Kuwait Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Kyrgyzstan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Lao Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Latvia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Lebanon Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Lesotho Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Liberia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Libya Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Liechtenstein Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Lithuania Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Luxembourg Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Macau Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Madagascar Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Malawi Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Malaysia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Maldives Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Mali Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Malta Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Martinique Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Mauritania Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Mauritius Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Mexico Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Moldova Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Monaco Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Mongolia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Montenegro Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Montserrat Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Morocco Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Mozambique Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Myanmar Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Namibia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Nepal Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Netherlands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
New Caledonia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
New Zealand Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Nicaragua Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Niger Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Nigeria Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
North Korea Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
North Macedonia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Norway Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Oman Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Pakistan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Panama Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Papua New Guinea Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Paraguay Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Peru Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Philippines Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Poland Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Portugal Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Puerto Rico Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Qatar Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Romania Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Russia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Rwanda Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Saint Barthélemy Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Saint Kitts and Nevis Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Saint Lucia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Saint Martin Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Saint Vincent and the Grenadines Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Samoa Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
San Marino Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Saudi Arabia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Senegal Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Serbia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Seychelles Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Sierra Leone Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Singapore Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Sint Maarten Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Slovakia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Slovenia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Solomon Islands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Somalia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
South Africa Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
South Korea Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
South Sudan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Spain Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Sri Lanka Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Sudan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Suriname Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Sweden Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Switzerland Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Syria Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
São Tomé and Príncipe Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Taiwan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Tajikistan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Tanzania Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Thailand Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Togo Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Tonga Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Trinidad and Tobago Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Tunisia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Turkey Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Turkmenistan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Turks and Caicos Islands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
US Virgin Islands Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
USA Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Uganda Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Ukraine Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
United Arab Emirates Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
United Kingdom Zimbabwe specific information: Eligible fully vaccinated passengers returning from this country, can do so with just a day 2 test.
Uruguay Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Uzbekistan Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Vanuatu Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Vatican City Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Venezuela Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Vietnam Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Yemen Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.
Zambia Zimbabwe specific information: Passengers must present a negative COVID-19 test taken at most 48 hours before departure.